Guddoomiye Mursal: In la xaddido Xildhibaannada yimaada gurigeyga wax fiican maaha – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa ku tilmaamay arrin aan fiicneen in Xildhibaannada ugu tagaya hoygiisa loo diido iney u gudbaan barta uu degan yahay. Waxa uu ugu baaqay Xukumadda iney fahamto xaqa Xildhibaannada iyo Xasaanadda ay leeyihiin. “Waxaan ugu baaqayaa Xukumadda in Xildhibaanada ay ogaato iney xaq u leeyihiin dhaq dhaqaaqooda” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Waxa uu sheegay in xakameynta dhaqdhaqaaqyada Xildhibaannada hoygiisa tagaya ay tahay wax hadda soo kordhay, oo aan horay u jirin. “Baryahaan dambe, waxaa bilaabatay in Xildhibaannada loo diido in ay u soo gudbaan hooyga aan daganahay, waxaana leeyahay arrinkaasi arrin wanaagsan maahan” ayuu yiro Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal.
Guddoomiye Mursal waxaa kale uu sheegay iney shaqada Golaha Shacabku dib u bilaaban doonto dhawaan, laakiin waqti rasmiya muusan sheegin. Wuxuuse xusay in ay haddaba Guddiyada Goluhu ku shaqeeyaan Xarunta Filla Hargeysa. “Shaqada Golaha Shacabka waa socon doontaa. Hadda, waxaan ku sii Shaqeyneynaa Xarunta Filla Hargaysa, oo ay haddaba ku shaqeeyaan Guddiyada Golaha” ayuu yiri Mursal.